Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika, Bartlett, fiaraha-miasa vaovao amin'ny filoha Clinton momba ny fahaizan'ny fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika, Bartlett, fiaraha-miasa vaovao amin'ny filoha Clinton momba ny fahaizan'ny fizahan-tany
Ankoatry ny filoha sy ny sekretera Clinton, ny minisitry ny fizahan-tany ao Jamaika, ny Hon. Edmund Bartlett dia niresaka androany fa mitohy Fihaonana faha-4 an'ny Clinton Global Initiative (CGI) Action Network momba ny fanarenana aorian'ny loza ao amin'ny University of the Virgin Islands, St. Thomas, USVI manolotra ny Ivotoerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fitantanana krizy.
Fandikana ny lahateniny:
Hanomboka ity lahateny ifotony ity aho amin'ny filazako fa raha afaka mampiasa teny iray izahay mba hamaritana tsara indrindra ny indostrian'ny fizahantany manerantany dia ny teny iray dia "mahazaka". Ny sehatra dia niatrika fandrahonana maro isan-karazany saingy naneho fahaizana hafahafa foana hanarina sy hiakatra amin'ny haavo avo kokoa. Na eo aza izany, ny sehatry ny fizahan-tany manerantany izao dia miatrika ambaratonga tsy azo antoka sy tsy azo oharina izay tsy maintsy hamalian'ny mpanao politika amin'ny fomba mahery setra sy tsy miova. Tsy maintsy arovantsika ny tsenan'ny fizahantany, indrindra ireo tompon-tany tompon-tany tompon-tany, izay nanampy hitondra an'izao tontolo izao ho any amorontsika. Mpamatsy tolotra miasa ao an-toerana maromaro no nanome lanja lehibe ny toekarena Karaiba. Orinasa iray, indrindra indrindra, Sandals, dia nanampy tamin'ny fametrahana ny Karaiba an-tsarintany.
Ny fahamaikana omena amin'ny fampivoarana ny faharetan'ny toerana fizahan-tany maneran-tany dia mifototra amin'ny fanamafisana ny fandrahonana nentim-paharazana amin'ny fizahan-tany manerantany toy ny loza voajanahary mifandraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiakaran'ny maripana ary ny fisian'ny fandrahonana mahery vaika vaovao toy ny areti-mifindra, fampihorohoroana ary heloka an-tserasera mifandraika amin'ny ny fiovan'ny toetran'ny dia manerantany, ny fifandraisan'olombelona, ​​ny fifanakalozana ara-barotra ary ny politika manerantany.
Amin'ny maha minisitry ny fizahantany avy amin'ny iray amin'ireo faritra be olona indrindra eto an-tany, dia sahiko ny milaza izany, manana fomba fijeriko manokana momba ny maha-zava-dehibe ny fananganana faharetana eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Tsy i Karaiba ihany no faritra be olona indrindra eto an-tany noho ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny nosy dia miorina ao anatin'ny fehikibo rivodoza Atlantika izay anaovana ny sela misy tafio-drivotra ary ny faritra dia mitoetra eo amn'ny tsipika fanenjehana telo mahery vaika, io ihany koa no betsaka indrindra faritra miankina amin'ny fizahantany eto amin'izao tontolo izao.
Ny angon-drakitra ara-toekarena farany indrindra dia manondro fa ny fiveloman'ny olona iray isaky ny mponina efatra any Karaiba dia mifandray amin'ny fizahan-tany ary ny fitsangantsanganana sy ny fizahan-tany dia mandray anjara amin'ny 15.2% amin'ny harin-karena faobe amin'ny ankapobeny sy amin'ny 25% ny harin-karena faobe mihoatra ny antsasaky ny firenena. Raha ny Nosy Virginie Britanika, ny fizahantany dia mandray anjara amin'ny 98.5% amin'ny harin-karena faobe. Ireo tarehimarika ireo dia mampiseho mazava ny fandraisana anjara lehibe ara-toekarena ho an'ny Karaiba sy ny mponina ao aminy. Nasongadin'izy ireo ihany koa ny maha-zava-dehibe ny famolavolana paikady hanamafisana ny loza mety hitranga izay mety hanakorontana ny serivisy fizahantany any amin'ny faritra ary hiteraka fihemorana maharitra amin'ny fitomboana sy ny fampandrosoana.
Ny tena manamarika indrindra dia ny tatitra vao tsy ela akory izay izay nanondro fa ny faritra Karaiba dia mety hahavery ny 22 isan-jaton'ny harin-karena faobe amin'ny 2100 raha toa ka tsy miverina ny fiovan'ny toetr'andro ankehitriny miaraka amin'ireo firenena tsirairay manantena ny iharan'ny fatiantoka ny harinkarena faobe eo anelanelan'ny 75 sy 100 isan-jato. Ny tatitra dia nanoritsoritra ny fiantraikany maharitra amin'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny harinkarena ao amin'ny faritra noho ny fahaverezan'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany. Satria fantatry ny ankamaroantsika fa niatrika loza voajanahary mafy ny faritra tato ho ato. Ny vanim-potoanan'ny rivodoza dia niafara tamin'ny fahaverezan'ny tombatombana tamin'ny taona 2017 nisy mpitsidika 826,100 tany Karaiba, raha oharina amin'ny vinavinan'ny rivodoza talohan'ny rivodoza. Ireo mpitsidika ireo dia mety hiteraka 741 tapitrisa dolara amerikana ary hanohana asa 11,005 3. Ny fikarohana dia manondro fa ny fanarenana amin'ny ambaratonga teo aloha dia mety haharitra efa-taona, raha izany, dia ho very vola mitentina US $ XNUMX miliara amin'ity faritra ity ny faritra.
Ankoatry ny fandrahonana miharihary amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny mpandray anjara amin'ny fizahan-tany dia tsy afaka manadino ireo ahiahy hafa izay mipoitra haingana ao anatin'ny tontolon'ny globalisation. Raiso, ohatra, ny fandrahonana fampihorohoroana. Ny fahendrena mahazatra dia ny ankamaroan'ny firenena tsy tandrefana amin'ny ankapobeny voatazona amin'ny fandrahonana fampihorohoroana. Na izany aza dia nisy fikomiana fampihorohoroana tato ho ato any amin'ireo faritra fizahan-tany toa an'i Bali any Indonezia sy i Bohol any Filipina izay nitady hanimba izany fiheverana izany.
Avy eo dia eo ihany koa ny fanamby amin'ny fisorohana sy ny fisian'ny valanaretina sy ny areti-mandringana any amin'ny faritra fizahan-tany. Ny loza ateraky ny valanaretina sy ny areti-mifindra dia efa nisy hatrizay noho ny toetran'ny dia sy fizahan-tany iraisam-pirenena izay mifototra amin'ny fifandraisana akaiky sy fifandraisana eo amin'ny olona an-tapitrisany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao isan'andro. Io loza io dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny tontolo ankehitriny dia mifamatotra amin'ny habetsahan'ny ankehitriny, ny hafainganana ary ny fivezivezena amin'ny dia mbola tsy nisy hatrizay. Fitsangatsanganana efa ho 4 miliara no nentin'ny rivotra tamin'ny taon-dasa fotsiny. Ny tatitra nataon'ny Worldbank tamin'ny taona 2008 dia nanondro fa ny areti-mandringana maharitra mandritra ny herintaona dia mety hiteraka fianjerana ara-toekarena vokatry ny fiezahana hisorohana ny aretina toy ny fampihenana ny dia an'habakabaka, ny fisorohana ny fandehanana any amin'ny toerana misy ny otrikaretina ary ny fampihenana ny fanjifana serivisy toy ny fisakafoanana fisakafoanana, fizahan-tany, fitaterana betsaka , ary ny fivarotana antsinjarany tsy ilaina.
Ary farany, ny fironana nomerika ankehitriny dia midika fa tsy maintsy mahatadidy ny fandrahonana azo tsapain-tanana ihany isika izao fa koa ny fandrahonana tsy hita maso mifandraika amin'ny hetsika elektronika. Ny ankamaroan'ny varotra mifandraika amin'ny fizahan-tany dia mandeha amin'ny fomba elektronika manomboka amin'ny fikarohana any an-toerana ka hatramin'ny famandrihana ka hatrany amin'ny famandrihana amin'ny serivisy amin'ny efitrano ka hatramin'ny fandoavana ny fiantsenana vakansy. Ny fiarovana ny lahatra dia tsy resaka fiarovana ny mpizahatany iraisam-pirenena sy ny fiainana eo an-toerana amin'ny loza ara-batana fotsiny izao fa midika koa fiarovana ny olona amin'ny fandrahonana amin'ny cyber toy ny halatra maha-izy azy, ny fanapahana kaonty manokana ary ny fifanakalozana sandoka.
Hitanay ny toerana niterahan'ny mpampihorohoro cyber be fanakorontanana amin'ny serivisy ilaina amin'ny firenena lehibe sasany tato ho ato. Na izany aza, tranga mampalahelo fa ny ankamaroan'ny toeran'ireo mpizahatany amin'izao fotoana izao dia tsy manana drafitra fanaovan-tsonia hiatrehana ny fanafihana an-tserasera.
Rehefa mikasa ny hampiorina ny fahaizantsika manohitra ireo fandrahonana lehibe efatra amin'ny fizahan-tany maneran-tany voatanisa tamin'ny fampisehoana nataoko ary koa ireo hafa tsy voatonona anarana, singa iray manan-danja amin'ny rafitra faharetana mandaitra ny fahitana mialoha ireo tranganà loza. Io dia manova ny fifantohana amin'ny famaliana ireo fanakorontanana ka hisorohana azy ireo voalohany. Ny faharetan'ny fananganana dia mitaky fomba fiasa mifototra amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra nasionaly, isam-paritra ary iraisam-pirenena eo amin'ireo mpanao politika fizahan-tany, mpanao lalàna, orinasam-pizahan-tany, ONG, mpiasan'ny fizahan-tany, andrim-panabeazana sy fanofanana ary vahoaka marobe hanamafisana ny fahaizan'ny andrim-panjakana mialoha, mandrindra, manara-maso ary manombatombana ireo hetsika sy programa hampihenana ireo tranga mety hampidi-doza.
Ireo loharanom-bola ilaina dia mila atokana ho an'ny fikarohana, ny fanofanana, ny fanavaozana, ny fanaraha-maso, ny fizarana vaovao, ny simulation ary ny fandraisana andraikitra hafa amin'ny fananganana fahaiza-manao. Ny zava-dehibe dia tsy ho lany amin'ny tontolo iainana intsony ny fampandrosoana ny fizahantany satria ny tontolo iainana no hitahiry vokatra fizahan-tany mahasalama, indrindra ho an'ireo nosy. Ny ezaka hanoherana ny fiovan'ny toetr'andro dia tsy maintsy apetraka mafy amin'ny politikam-pizahantany manomboka amin'ny famolavolana kaody fananganana ka hatramin'ny fanomezana fahazoan-dàlana hanangana lalàna hatramin'ny fanao fanao amin'ny tontolo iainana tsara indrindra ho an'ireo mpanome tolotra mba hananganana marimaritra iraisana amin'ny mpiray antoka rehetra momba ny maha-zava-dehibe ny fampiasana teknolojia maitso ao ny sehatra.
Rehefa namaly ny antso hananganana faharetan'ny fizahan-tany any Karaiba aho dia tena reharehako fa ny ivon-toerana faharetana voalohany an'ny faritra antsoina hoe 'The Global Tourism Resilience and Crisis Management Center' dia natsangana tao amin'ny University of the West Indies, Mona Campus Jamaica. Ny fotodrafitrasa, izay voalohany amin'ny karazany, dia hanampy amin'ny fanomanana, fitantanana ary fanarenana amin'ny fikorontanana sy / na krizy izay misy fiatraikany amin'ny fizahan-tany sy mandrahona ny toekarena miankina amin'ny sehatra sy asa fivelomana.
Ny foibe dia mifantoka amin'ny entana manan-danja efatra amin'izao fotoana izao. Ny iray dia ny fananganana diary akademika momba ny faharetana sy ny fanakorontanana manerantany. Niorina ny birao famoahana ary notarihin'ny Profesora Lee Miles avy ao amin'ny University Bournemouth miaraka amin'ny fanampian'ny George Washington University. Ireo entana hafa azo entina dia ahitana ny fandrafetana drafitra hanamafisana; famoronana barometatra faharetana; ary fananganana seza akademika ho an'ny faharetana sy ny fanavaozana. Izany dia mifanaraka amin'ny baikon'ny Centre hamorona, hamokatra ary hamokatra fitaovana, torolàlana ary politika hitarika ny fizotry ny fanarenana aorian'ny loza iray.
Ny Ivotoerana dia hiarahan'ny manampahaizana sy asa ekena iraisam-pirenena amin'ny sehatry ny fitantanana ny toetr'andro, fitantanana tetikasa, fitantanana fizahan-tany, fitantanana risika fizahantany, fitantanana krizy fizahantany, fitantanana serasera, varotra fizahan-tany sy marika ary koa fanaraha-maso sy fanombanana.
Ankoatra ny fananganana ivon-toerana Resilience Center izay manome rafitra andrim-panjakana matanjaka amin'ny fananganana fiaretana fizahan-tany dia fantatro ihany koa fa ny faharetana dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny fampiroboroboana ny fifaninanana eo amin'ny toerana. Ny fanamafisana ny fifaninanana any amin'ny toerana itodiana dia mitaky ny hametrahan'ny mpanao politika fizahan-tany fizaran-tsena fizahan-tany hafa.
Ny toerana fitsangantsanganana kely kokoa, indrindra, dia tsy afaka hiantehitra amin'ny tsena loharanom-pahalalana vitsivitsy fotsiny any Amerika Avaratra sy Eropa ho an'ny vola miditra amin'ny fizahan-tany. Tsy paikady mahomby intsony izany hananana vokatra fizahan-tany mety. Izany dia satria mipoitra ny tanjona fifaninanana vaovao izay mampihena ny anjaran'ny mpizahatany nentim-paharazana ary koa noho ny fiankinan-doha amin'ny tsena nentim-paharazana dia mampiharihary ny toerana itodiana ho marefo amin'ny fivoarana ratsy any ivelany. Mba hitoerana hatrany amin'ny fifaninanana ary hahatanty ny fiantraikan'ny fivoarana ratsy eo amin'ny tsena loharanom-paharazana, ny tanjona dia tsy maintsy mikendry sombin-javatra vaovao na tsenan-tsarimihetsika hanintona ireo mpandeha avy amin'ny faritra tsy nentin-drazana.
Io fisainana manavao io no nahatonga anay nametraka ny tambajotranay dimy amin'ny Jamaika- gastronomy, fialamboly ary fanatanjahan-tena, fahasalamana sy fahasalamana, fiantsenana ary fahalalana- ho fandraisana andraikitra hitrandrahana ireo tanjaka anananay hampivelatra ny fahasarotana iraisampirenena eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. mandrisika ny tombontsoa ara-toekarena eo an-toerana bebe kokoa.
Ho famaranana, ity kaonferansa ity dia hanamora ny fifanakalozana hevitra misy dikany sy ny fisainana momba ny faharetana sy ny fitantanana krizy. Ireo hevitra ireo dia hanampy ny mpanao politika mpizahatany rehetra sy ny mpiray antoka manatrika ny fananganana paikady efa misy ary koa ny handinika ny lalana / vina vaovao. Farany dia tokony hisy ny marimaritra iraisana momba ny rafitra / drafitra faharetana iraisan'ny rehetra izay azo raisin'ireo toerana fizahan-tany rehetra manerantany.
Hotel Association of Los Angeles dia mitaona an'i Veronica Perez hanamafy ny andraikitry ny LA orinasa
Ny fikarohana momba ny fanararaotana ara-nofo ataon'ny ankizy dia ilaina maika hoy ny ONG
11 minitra lasa izay